कालिगण्डकी डाइभर्सन हुन्छ ? के भन्छन् मुख्यमन्त्री ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperकालिगण्डकी डाइभर्सन हुन्छ ? के भन्छन् मुख्यमन्त्री ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
कालिगण्डकी डाइभर्सन हुन्छ ? के भन्छन् मुख्यमन्त्री ?
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले केही दिनअघि कालीगण्डकी(तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उनको सपना कहिलै पूरा नहुने जवाफ फर्काए । पौडेलले यो डाईभर्सन मदन भण्डारीको सपना भएकोले जसरी पनि पूरा हुने बताएका थिए । बुधबार कालिगण्डकीको छेउमा पुगेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘कालिगण्डकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको नदी हो । यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिनेछ ।’
स्याङ्जाको चापाकोट ८ खोरियाघाटबाट पोखरेलले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्नका लागि युनेस्कोसँग समन्वय गरिएको दाबी गरे । प्रस्तावअनुसार रामदी नजिकै पिपलडाँडाबाट डाइभर्सन बनाएर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने योजना छ । संघ सरकारको यो सपना पूरा हुन नदिने उनको भनाइ छ । ‘कालीगण्डकी अरु नदीजस्तो होइन । यसको छुट्टै महत्व र विशेषता छ,’ उनले भने, ‘कालीगण्डकी हाम्रो सभ्यता, आस्था, भावना र शालिग्रामसँग जोडिएको छ ।’
डाइभर्सनका लागि बुटवलमा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । इन्जिनियरहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । गण्डकी सरकारले सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर डाईभर्सनबारे आफ्ना धारणा मागेको थियो । कसैले पनि समर्थन गरेका छैनन् । कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिकका साथै आर्थिक महत्वका साथै सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा। सुवास अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको छ । समितिले केही दिनमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने अधिकारीले बताए ।